Maxaan weydiin karnaa macmiilka ka hor inta aan la qaabeynin astaantooda? | Abuurista khadka tooska ah
Maxaan weydiin karnaa macmiilka ka hor inta aan la qaabeynin astaantooda?
Khibrad ahaan sida nashqadeeyayaashu maahan wax inta badan ka soo baxa wada hadalka taleefanka, marka la sameynayo a mashruuca naqshadeynta garaafka Waa lagama maarmaan in la caddeeyo fikradda macmiilka, nooca shirkadda, ujeeddooyinka iyo dhammaan faahfaahinta waxtar noo yeelan kara marka waqti lagu horumariyo mashruuc.
Haddii macmiilku kaa rabo inaad naqshadeyso astaantiisa, waxaad badbaadin doontaa waqti iyo lacag badan haddii aad marka hore weydiiso su'aalaha saxda ah, haddii aad tahay ardayga naqshadeynta mise waxaad bilaabeysaa inaad gasho dunida iskaa wax u qabso ah Waxaad ka raadin kartaa foomka su'aalaha internetka si uu macmiilkaagu u buuxiyo una ogaado waxyaabaha kaa caawin doona markaad sameysid naqshadeynta.
Su'aalo-weydiin iyo su'aalo aad weydiiso macmiil kahor sameynta astaanta
Mid ka mid ah su'aalahaan waxaad awoodi doontaa inaad si fudud ugu qorsheyso mashruucaaga, sidoo kale waad ku dari kartaa su'aalaha sida ay yihiin abuurkaaga sidoo kale waxaad dhigi kartaa qaar la jaanqaadi kara wadankaagii hooyo.
Waxaad ka heli kartaa fikrad ciriiri ah oo ku saabsan dhadhan iyo baahiyo macmiilka leh foomka su'aalaha kahor qaabeynta astaanta, markaa waad badbaadin kartaa waqti u dirista soo-jeedin aan loo baahnayn iyo inaad si joogto ah wax uga beddesho.
Su'aalahan shirkadeed waxaa badanaa loo qaybiyaa dhowr qaybood sida:
Macluumaadka shirkadda: Cabirka, aasaaska, xogta xiisaha iyo waxyaabaha gaarka ah.
Marca: Naqshad sameynta, macnaha farta, midabada iyo ficillada halkudhigga.
Dookha naqshada: Midabada doorbidka, astaanta sawirrada, matalaadda astaanta, xaddidaadaha iyo noocyada la doorbido
Bartilmaameedsadayaashar: Is beddelka ujeeddooyinka, kala duwanaanshaha da'da, baahinta ganacsiga, dabeecadda juquraafiyeed iyo jinsiga dhagaystayaasha.
Sidaad arki karto, kani waa dukumiinti aad u dhameystiran oo kaa caawin doona shaqadaada oo kuu fududeyn doona.
Naqshadayaashu guud ahaan waxay saacado ku qaataan wicitaanada macaamiisha waxayna weydiiyaan su'aalo ku saabsan sida astaanta loo sameynayoHadda su'aalahaan waxaad ku haysaa su'aalaha aasaasiga ah ee kaa caawin doona inaad bilowdo shaqadan.
Su'aalaha kale ee maskaxda ku soo dhaca intaad mashruucan horumarinayso, waxaad toos ula tashan kartaa macmiilka.
Su’aalahan la isweydiinayo ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya laga aqoonsan yahay adduunka naqshadeynta garaafka, sidaa darteed haddii aad mid u sameyso macmiilkaaga, wuxuu ku arki doonaa si togan maxaa yeelay wuxuu arkaa xiisaha aad u qabto, marka shaqada si wanaagsan loo qabto iyo sidoo kale taas wuxuu dareemi doonaa inaad qaddarinayso waqtigiisa iyo lacagtaada.
Faa'iidada kale ee ay su'aalahani noo keeneen ayaa ah inay naga caawineyso inaan sifiican ula ekaano macmiilka anaga oo aan dhib ku qabin taasna waa caadi shaqo ayey na weydiinayaan wakhti cayiman, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan ku dhameysano oo aan bilowno sameynta nashqadaha oo aan si joogto ah ugu dirno macmiilka, maadaama uu naga codsanayo inaan isbedel joogto ah ku sameyno mararka qaarna arintaan wey dhibsan kartaa maxaa yeelay waxaan si joogta ah u carqaladeynaa jadwalkiisa shaqo.
Tani ma dhaceyso haddii aan fulino xogwaraysigan maadaama aan ogaan lahayn habka aan ku fulin lahayn naqshadeynta waxaanan sidoo kale tixgelin siin doonnaa midabada iyo farta in macmiilku jecel yahay.
Sameynta astaan ​​uma fududaan sida ay umuuqato maxaa yeelay macaamiisha badanaa waxay leeyihiin dhadhankooda taasi way kala duwanaan doontaa had iyo jeer, sidaa darteed way adag tahay in la ogaado sida ay uga falcelin doonto qaabkeenna iyo in ka badan haddii aan wax fikrad ah ka haysan macnaha shirkadda ama midabada waxay rabaan inay shaqaaleeyaan. Marar badan ayaan weydiinaa su'aalaha qaarkood ee laxiriira tan shaqsi ahaan laakiin xaaladaha badankood waxaan u muuqanaa inaan ilaawno ama iyagu ma ahan su'aalaha lagama maarmaanka u ah naqshadeynta inay ahaato mid gaar ah oo aan ku qancino macmiilka iyo shaqaalahooda.
IN LAGA TAGO dhibaatooyinkaas waxaan kugula talineynaa inaad raadiso tusaalooyinkan oo markaa aad iska ilaalin karto dhibaatooyinka iyo kharashyada aan loo baahnayn ee waqtiga iyo lacagta oo aan adiga oo keliya ahayn, laakiin sidoo kale macaamiishaada, maxaa yeelay inta yar ee aad dhibeysid ayaa kaa farxad badan kula jooga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Maxaan weydiin karnaa macmiilka ka hor inta aan la qaabeynin astaantooda?
Midabka timaha ku beddel Photoshop
Naqshadeynta iyo hal-abuurka farsamada